ktmkhabar.com - के साँच्चै ‘हट लेमन’ पिउँदा तौल घट्छ ?
तातो पानीमा केही थोपा कागती हालेर ‘हट लेमन’ भन्दै पिउनुलाई शरिरको तौल घटाउने अचुक उपायका रूपमा लिने ट्रेन्ड बढ्दै छ । हामीलाई दैनिक जीवनमा भेट हुने धेरैले हट लेमन तौल घटाउने उत्तम उपाय भन्दै सुझाइरहेका हुन्छन् ।
यदि तौल घटाउन यति सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम चाँडै तोड्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
घ्यू खानुका आश्चर्यजनक पाइदै फाइदा, अनुसन्धान भन्छ मोटोपन समेत घट्छ !
मुख, ओठ र जिब्रोमा खटिरा आयो ? यस्ता छन् घरेलु उपाय
स्वस्थ रहन अबलम्बन गर्नुपर्ने केही टिप्स